mercredi, 06 novembre 2019 08:46
Dadah (Mahaleo): Hakarina any Antananarivo anio ny nofomangatsiakany
Hiala eto Antsirabe anio maraina ny vatana mangatsiakan’i Andrianabela Rakotobe na Dadah, mpikambana mpamorona ny Tarika Mahaleo, ary hakarina any Antananarivo. Hiaretan-tory, homem-boninahitra ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina i Dadah ny anio. Ho entina ao amin’ny Katedraly FJKM Analakely ny alakamisy 7 novambra, maraina, hanaovam-beloma farany ary mialoha ny hitondrana azy any Betafo Vakinankaratra, tanindrazany toerana hanaovana ny fandevanana. Ny alahady 3 novambra 2019 i Dadah no nodimandry tampoka, teo amin’ny faha-65 taonany. (Jereo Sary Tohiny)
Nampahafantatra ny fandaharam-potoana ao amin’ny pejy facebook an'ny tarika Mahaleo, i Charles sy Bekoto ary Dama ao amin’ny tarika Mahaleo amin’ny fanomezam-boninahitra farany ho an’i Andrianabela Rabekoto na Dadah, mpikambana tao amin’ny tarika, izay nodimandry omaly alahady 3 novambra 2019. Ao an-tranony ao Tsarasaotra-Antsirabe ny razana no vangiana ity alatsinainy 4 novambra ity sy ny talata 5 novambra. Hiakatra aty Antananarivo ny nofomangatsiaka ny alarobia 6 novambra, ary ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny famangiana sy alim-bavaka. Mody an-tanindrazany any Mandrosoa Distrikan’i Betafo, toerana handevenana azy i Dadah ny Alakamisy 7 novambra 2019.
Hotanterahina eo amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny 29, 30, 31 oktobra 2019 ny hetsika « AKORY E! », izay atrikasa fampiroboroboana ny fitenim-paritra karakarain’ny fikambanana GASIKO. Ny fahatsapana fa maro ny samy Malagasy tsy mifankahazo eo amin’ny fiteny, noho ny tsy fahampian’ny fahalalana ka mampisy elanelana no nanosika ny fikambanana hikarakara ity hetsika ity, miaraka amin’ny ministeran’ny kolontsaina sy serasera, ary anisan’ny tanjona amin’ny fanatanterahina ity hetsika ity ihany koa ny hampidirana ny fianarana fitenim-paritra ho ao anatin’ny rafi-pampianarana Malagasy.
Higadona eto Fianarantsoa amin’ny sabotsy 26 oktobra izao Ra-Tin, nivoaka mpandresy tamin’ny fifaninanana « KOPI-KOLE 2019 » nokarakarain’ny fahitalavitra tsy miankina TV Plus. « KOPI-KOLE Rossy » i Ra-Tin. Hisy lanonana ho fandraisana azy hatao eo amin’ny Rex Tsianolondroa ny tolakandron’io Sabotsy io, hafanain’ny Tarika Rossy miaraka amin'ny Bampampa. (Jereo Sary Tohiny)
Nosalorana mari-boninahitra grand officier de l'ordre national i Rajaonarison Famantanantsoa na Fafa Mahaleo. Ny praiministra Ntsay Christian no nanolotra izany. Ny Razana dia hanainga eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny tolakandro. Mifandimby manolotra hira ireo mpanakanto maro be alohan'ny hiazoany ny fiangonana tranovato Faravohitra, ary eny Ilafy kosa ny handevenana azy. (Jereo Sary Tohiny)
Hisy ny fanomezam-boninahitra farany an-dRajaonarison Famantanantsoa na Fafa Mahaleo ; izany dia hatao ao amin’ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny alarobia 23 oktobra 2019. Hifamotoana eny an-toerana ny artista amin’ny 8 ora sy sasany maraina, raha ny fandaminan’ny OMDA (Office Malagasy du Droit d'Auteur). Amin'ny 10 ora no ho tonga ao an-toerana ny nofomangatsikan'i Fafa Ho entina eny amin'ny FJKM Faravohitra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, aorian’izay, io andron’ny alarobia io ihany, dia hiazo an’i Rangaina-Ilafy Antananarivo Avaradrano hanatanterahana ny fandevenana. Nodimandry omaly alahady 20 oktobra 2019, teo amin’ny faha-65 taona i Fafa rehefa nialana nenina notsaboina tao amin’ny HJRA Ampefiloha Antananarivo. (Jereo Sary Tohiny)
Manantena ny fanohanantsika ara-moraly, indrindra ara-bola, ireo tanora vavitsika Malagasy hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny robotika atao any Armenia ny 9 novambra ho avy izao. Merci de soutenir nos jeunes filles pour le concours mondial en robotique Armenia 9 novembre 2019.Vos encouragements sont les bienvenus mais surtout, elles ont besoin d'argent pour y aller. (Voir Photos Suite)
Fampisehoana lehibe tao amin’ny Coliseum Antsonjombe-Antananarivo no nanakatona ny fifaninanana « Découverte » sy « Kôpi Kôlé » taona 2019, nokarakarain’ny fahitalavitra tsy miankina TV Plus Madagascar. Nambabo ny fon’ny mpijery sy ny mpitsara ary ny mpanatrika ny famaranana i Mi-Dera Glôpôpôpy avy ao Antsirabe, ka izay no voafidy ho « Coup de cœur » teo amin’ny sokajy « Découverte » tamin’ity fifaninanana ity. Nandrombaka ny fandresena tamin’io sokajy « Découverte » kosa i Mamiana. Ity tovovavy ity no zandriolona indrindra tamin’ireo mpifaninana niatrika ny famaranana ; 14 taona i Mamiana. Fa nambabo ny fon’ny mpijery sy ny mpitsara ary ny mpanatrika ny famaranana ny sokajy « Kôpi Kôlé » tamin’ity andiany 2019 ity i Hery avy any Moramanga, nanao « Kôpi Kôlé » Jaojoby. Nandrombaka ny « Kôpi Kôlé 2019 » i Ra-Tin avy any Fianarantsoa, « Kôpi Kôlé Rossy».
« Tsingerintaona nahaterahako androany 20 oktobra », hoy i Big MJ ao amin’ny pejiny facebook. Faniriany ny hiara hifaly sy hiara hisakafo amin’ny olona rehetra, saingy ho sarotra izany hoy ity mpanakanto zanak’Antalaha ity. Nitety toerana samihafa i Big MJ, androany, nizara pizza sy sandwitch tamin’ireo olona sahirana, nanamarihana izao fankalazany ny faha-32 taonany izao. Toetranaina Parfait no tena anarany, Big MJ kosa no anarana maha mpanakanto ahafantaran’ny maro azy. (Jereo Sary Tohiny)
Namoy ny rahalahy, mpikambana mpiara-mamorona ny tarika Mahaleo. Nodimandry ny marainan’ity alahady 20 oktobra 2019 ity, teo amin’ny faha-65 taonany Rajaonarison Famantanantsoa na Fafah araka ny ahafantaran’ny maro azy. Efa narefo fotoana lavalava, misava mirakotra ny fahasalaman’i Fafah, antony tsy nahafahany niaka-tsehatra niaraka tamin’ireo namany tamin’ny fampisehoana nataon’ny tarika Mahaleo, tao Antsahamanitra ny 13 oktobra 2019. Ao amin’ny tranompaty HJRA Ampefiloha ny nofo mangatsiakany. (Jereo Sary Tohiny)